जलविद्युत कम्पनीको नाफा करिब ३ अर्ब: अपर तामाकोशीसहित ३ कम्पनी अब्बल, कुनको कति ? - Arthatantra.com
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पहिलो त्रैमासमा जलविद्युत कम्पनीहरुको नाफा सुधार देखिएको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्म कम्पनीहरुले करिब ३ अर्ब नाफा गरेको छन् ।
संचालनमा रहेकामध्ये ३५ कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
उक्त अवधिमा ती कम्पनीहरुले २ अर्ब ९० करोड ९१ लाख २३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । जुन गत वर्षको असोज मसान्तको तुलनामा १३५.५७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीहरुको नाफा १ अर्ब २३ करोड ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
विवरण अनुसार ५ कम्पनीहरु नोक्सानीमा देखिएका छन् । जसमध्ये शिवश्री हाइड्रोपावर १० करोड ३३ लाख ३० हजार रुपैयाँ र घलेम्दी हाइड्रो २ करोड १७ लाख ३९ हजार, युनाईटेड मोदी १ करोड ४४ लाख ५४ हजार, रसुवागढी १ करोड १३ लाख ११ हजार र साञ्जेन जलविद्युत ८५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी नाफा अपर तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको रहेको छ । कम्पनीले उक्त अवधिमा ८६ करोड १९ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत वर्ष १ करोड १८ लाख १ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले यस वर्षको सोही अवधिमा भने उल्लेखीय सुधार गरेको हो ।
नाफा बढी कमाउने कम्पनीको दोस्रो स्थानमा रहेको रिदी हाइड्रोपावरले चालु आवको असोज मसान्तमा ४५ करोड ५४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । कम्पनीको पनि गत वर्षको तुलनामा उल्लेखीय सुधार गरेको हो । गत वर्षको असोज मसान्तमा कम्पनीको नाफा ७८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको थियो ।
यस्तै, माउन्टेन इनर्जी नेपालले २९ करोड ३५ लाख ८ हजार, सानिमा माइ हाइड्रोपावर कम्पनीले २४ करोड ३६ लाख ३० हजार रुपैयाँ, चिमिमे हाइड्रोपावरले २० करोड ९८ लाख ६९ हजार, माउटेन हाइड्रो नेपालले ११ करोड ८५ लाख ४९ हजार र पाँचथर पावरले १० करोड ३१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।
उक्त अवधिका सबैभन्दा कम नाफा कमाउने दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरले २९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कमाएको छ । यद्यपि, गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा भने कम्पनी ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको थियो । यसका आधारमा भने कम्पनीको नाफामा उल्लेखीय सुधार नै मान्नुपर्दछ ।
अन्य कुन कम्पनीको नाफा कति ?
वि.सं.२०७८ मंसिर ५ आइतवार १८:२८ मा प्रकाशित
News Views: 536
अघिल्लाे मानुषी लघुवित्तका लगानीकर्ता फेरि मालामाल: आज पनि सेयर मूल्यमा उछाल, कति कित्ता बिक्री भयो ?
पछिल्लाे ललितपुरको कुमारीपाटीमा सानिमा बैंकको प्रायोरिटी काउन्टर